Ihe kachasị mma Amazon na-enye maka taa (23-01-2018) | Akụkọ akụrụngwa
Ihe kachasị mma Amazon na-enye maka taa (23-01-2018)
Amazon na-etinye anyị n'aka anyị n'izu a ọtụtụ usoro nke onyinye, onyinye nke ya na ya na ahịa nke ọnwa Jenụwarị. Site na ebe nrụọrụ weebụ Amazon, anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke onyinye ọkụ na-ejedebe na oge. Mana na mgbakwunye, anyị nwekwara ike ịchọta awade awa ole na ole nkeji.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara ya azụmahịa kachasị mma na anyị nwere ike ịchọta maka taa, onyinye ndị ga-ejedebe n'abalị iri na abụọ n'abalị, yabụ ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'ihe ị na-ekwu ma ọ bụ na-eche ka ọ daa na ọnụahịa, echefula nkwụghachi ego ọ na-enye anyị maka awa ole na ole.
2 Linkys WRT 1900 ACS Dual Band Router
3 Netgear Arlo IP Igwefoto
5 4K WiMiS Egwuregwu Igwefoto
6 70W chaja na ọdụ ụgbọ USB 10
Ọ bụrụ na anyị na-eme atụmatụ imegharị kọmputa anyị, Amazon na-enye anyị Medion M11, ihe nlele nke AMD A8-8650 jikwaa, ihe ngosi NVIDIA GeForce GTX 1060 nwere 3 GB nke RAM, 1 TB isi draịva na nke abụọ 128 GB maka buut SSDdị SSD, tinyere 8 GB nke Ram na Windows 10 Home. Usualgwọ ya bụ euro 799, mana obere oge iji zụta ya naanị euro 499.
Zụta Medion M11 - 1 TB HHD - 128 GB SSD - 8 GB Ram
Linkys WRT 1900 ACS Dual Band Router
Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị maka mkpuchi nke mgbaàmà wifi gị na ịchọrọ ọ bụghị naanị ịgbasa ya, kamakwa iji meziwanye ọsọ ahụ, yana Linkys router ị nwere ike ime ya n'ụzọ dị mfe site na ya abụọ band (2,4 na 5 GHz), ọtụtụ ya antennas na nhazi ya nke 1,6 GHz dual-core. Ọnụ ego ọ na-emebu bụ euro 229, mana obere oge anyị nwere ike ịzụta ya na euro 185,95.
Netgear Arlo IP Igwefoto
Ọ bụrụ na ị na-achọ igwefoto nche na enwere ike ijikwa ya na igwefoto ndị ọzọ sitere na otu onye ahụ, Netgear na-enye anyị ụdị Arlo, igwefoto nwere mkpebi 1080p, nke na-enye anyị ọhụụ abalị na ọnụahịa ya bụ euro 164,99, jiri ego 55 euro dị na ọnụahịa ya. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmalite ịchịkwa ụlọ gị ma ọ bụ ebe ọrụ gị site na igwefoto, azịza Netgear na-enye anyị ugbu a na Arlo nso bụ otu kachasị mma.
Buyzụta Netgear Arlo VMC3040-100PES
Anyị nwekwara ike ịnweta Netgear Arlo Pro, igwefoto nwere nlele nlele nke ogo 130 kwekọrọ na usoro onyunyo vidiyo Arlo. Usualgwọ ya bụ euro 249, mana obere oge, anyị nwere ike ịzụta ya maka naanị 187, 49 euro.
Zụta Netgear Arlo Pro HD
Ọ bụrụ na ị na-achọ All-in-one, ma ọ bụ maka azụmahịa gị ma ọ bụ maka ụlọ gị, Levono na-enye anyị Ideacentre 310, kọmputa nke 2-core Celeron processor jikwaa, nyocha 19,5-inch na mkpebi 1440 × 900, 4 GB nke Ram, 1 TB nke nchekwa na Windows 10 Home. Ọnụ ego ya bụ euro 399, nke ka njọ maka obere oge anyị nwere ike zụta ya 100 euro discount.
Zụrụ Lenovo Ideacentre 310
4K WiMiS Egwuregwu Igwefoto
WiMiUS na-etinye na mkpofu anyị maka euro 41,99, nke ọnụahịa ya bụ euro 69,99, Igwefoto emere nke na-enye anyị ohere ịdekọ na 4k mma na 24 fps, 2,5 k na 30 fps, na 2k na 30 fps, na 1080p na 60 fps na 720p na 120 fps. Igwefoto a anaghị egbochi mmiri, na-akwado omimi nke mita 40, yana gụnyere batrị abụọ na mkpuchi iji chebe ya n'oge njem. Ọ bụ ezie na mkpebi ndị ọ na-enye anyị abụghị nnukwu nsogbu, ịbanye n'ụwa nke ihe eserese ọ bụ ezigbo ihe atụ atụnyere na ọnụahịa nwere ezi uche.
Zụrụ 4K WiMiUS Igwefoto Egwuregwu
70W chaja na ọdụ ụgbọ USB 10
Ọ bụrụ na oge ọ bụla anyị ruru ụlọ, anyị ga-akwụ ụgwọ ekwentị anyị, smartwatch, mbadamba, ekweisi, yana nke nwunye na ụmụ anyị, ọnụọgụ plọg dị anyị mkpa nwere ike bụrụ nsogbu. Iji dozie nsogbu a Aukey na-enye anyị chaja nwere ike 70w nke ekesara n'ọdụ ụgbọ mmiri 10 USB ọ na-enye, nke mere na n'otu ntanye, anyị nwere ike ijikọ nke ọ bụla n'ime ngwaọrụ ndị anyị ga-akwụ ụgwọ kwa ụbọchị na-enweghị isi plọg n'ụlọ anyị. Ya na mbụ price nke 39,99 euro, ma n'ihi na a obere oge anyị pụrụ ịzụta ya maka naanị 27,99 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ihe kachasị mma Amazon na-enye maka taa (23-01-2018)
A robot chụrụ n'ọrụ mgbe otu izu ọrụ n'ihi ịbụ nke na-erughị eru
Akụkọ banyere ụmụ nwanyị na-akwado oge nke abụọ ya na nyocha a